Nzira yekuita nyore uye isingadhuri tic-tac-toe | Mhizha On
Maitiro ekuita tic-tac-chigunwe nyore uye isingadhuri
Irene Gil | | Crafts, Kadhibhodhi mhizha, Mapepa emhizha
Mune izvi Tutorial Ini ndinokudzidzisa iwe kugadzira kunakidzwa tic-tac-chigunwe. Mutambo uyo vana nevakuru vanogona kutamba, saka chidiki cheimba chinogona zvakare kubatana mukugadzirwa kwayo.
Kuita tic-tac-chigunwe iwe unozoda zvinotevera zvinhu:
Kaviri kadhibhodhi kadhibhodhi (gobvu)
Glue chena kana tsvimbo yeglue
Circular die cutter (sarudzo)
Kugadzira iyo dashboard tic-tac-chigunwe Tanga nekucheka kadhibhodhi kune saizi yaunoda, asi inofanirwa kuve yakaenzana, kuitira kuti mativi ayo ese aenzane.
Gira pepa rakarongedzwa kwariri neglue chena kana kunamira, uye bvisa zvakawandisa.
Kuti ufukidze mativi acho, namatidza tambo yemakadhibhokisi eruvara iwe rwaunoda pamucheto wese wekadhibhodi.
Nedenderedzwa kufa cutter kana chigero, gadzira madenderedzwa kubva mupepa rekuvaka. Iwe unofanirwa kutema mapfumbamwe nekuti iwo anozove matiki-tac-zvigunwe materu. Namatidza matenderedzwa mapfumbamwe pabhodhi iwe wawakagadzira.
Kune makadhi iwe aunogona kushandisa chero chaunoda, asi ini ndasarudza kupenda matombo nevana mupfungwa, nekuti ibasa ravanoda, vane nguva yakanaka. Penda uye uzvishongedze sezvaunoda, uye vari kushandawo pahunyanzvi hwemota, vachinakidzwa.
Vapende nependi yeacrylic kana kana uchida iwe unogona zvakare kushandisa mvura tempera.
Kana iwe uchida kuvadzivirira zvakanaka, isa dura revanish yekupedzisa iwe yaunoda, sezvo chiri chinhu chiri kuzoshandiswa, uye kutamba kunogona kudzikira nekukuvadza iyo pendi.
Chero zvazvingava, acrylic pendi inonamatira zvakanaka kwazvo kudombo kana iri porous, saka kana ukasaisa varnish iwe unogona kunge usina kana dambudziko.
Paunenge uine matombo akaoma iwe unokwanisa kuaisa pabhodhi uye izvi ndizvo zvichava mhedzisiro.
Iwe unogona ikozvino kutanga kutamba neyako imba bhodhi ye tic-tac-chigunwe, uye chakanakisa pane zvese ndechekuti iwe unogona kuzvigadzira sezvaunoda zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts » Maitiro ekuita tic-tac-chigunwe nyore uye isingadhuri
Nzira yekugadzira trivet nematanda akapetana emapuranga
Zvigadziriswazve gaba repinushini